command - Synonyms of command | Antonyms of command | Definition of command | Example of command | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for command
Top 30 analogous words or synonyms for command
အပိုလို ၁၁ Command module at the National Air and Space Museum
MATLAB အခြား programming language များတွင် semicolon ကို command များ အဆုံးသက်ရန်တွင်သုံးသည်။ MATLAB သည် semicolon သုံးခြင်းသည် optional ဖြစ်ပြီး မပါလျှင် အဖြေ ကို command prompt တွင် ပြသည်။ codice_7 ကဲ့သို့ အဖြေမရှိသော ဖန်ရှင်များတွင် semicolon ပါသည်နှင် မပါသည်တို့ အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
အပိုလို ၁၁ Apollo 11 spacecraft. SM: Service Module (no call sign); CM: Command Module, Columbia; LM: Lunar Module, Eagle
MATLAB MATLAB သည် M-code ဟုခေါ်သော MATLAB programming language ကို အခြေခံထား သည့် ရေးထုံး (syntax) ဖြစ်သည်။ M-code ပရိုဂရမ် များ မောင်းရန် အလွယ်ဆုံးမှာ MATLAB command window ၏ prompt '»' တွင် ရိုက်ထည့်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် MATLAB ကို သင်္ချာဆိုင်ရာ အပြန်အလှန် shell အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထိုညွန်ကြားချက်များကို စာဖိုင် အဖြစ် သိမ်းနိုင်သည်။ ထိုကိစ္စအတွက် MATLAB Editor ကိုသုံးပြီး ဖန်ရှင်များပါသည့် script အဖြစ်သိမ်းနိုင်သည်။ ဖန်ရှင်များသည် မူလရှိနေသော MATLAB command များကို ဖြည့်စွက်ပေးသည်။
၂၀၁၅ ကိုးကန့်စစ်ပွဲ The MNDAA is thought to be under the command of former leader Pheung Kya-shin, who was ousted from his position byagovernment-backed Kokang faction in 2009 and has since lived in relative obscurity in China.
Break key ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်တစ်ခု အလုပ်လုပ်နေခြင်းကို ရုတ်တရက် ရပ်တန့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာတွင် ပရိုဂရမ် အလုပ်လုပ်နေခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် နည်းလမ်း ၂ ခုရှိသည်။ Esc key ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ၊ ဤသို့ပြုလုပ်၍မရပါက Ctrl + C ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ၊ ထိုသို့ ပြုလုပ်၍မရပါက Ctrl + Break ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ပရိုဂရမ်အလုပ်လုပ်နေခြင်းကို ဟန့်တား ရပ်တန့်စေလိုက်သည်။ Apple Macintosh ကွန်ပျူတာများဖြင့် command + ကို ရိုက်နှိပ်ပါက လုပ်ဆောင်ချက်အား ရပ်တန့်စေနိုင်သည်။
MySQL MySQL databases ကို adminstraion လုပ်ဖို့ရာမှာ command-line ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ GUI အနေနဲ့လည်း administration လုပ်နိုင်ပြီး ၎င်း GUI tool ကို download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ MySQL Administrator နဲ့ MySQL Query Browser တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ GUI tool နှစ်ခုစလုံးကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ MySQL GUI Tools ကိုလည်း ရနေနိုင်ပါပြီ။
အပိုလို ၁၁ President Richard Nixon was aboard Hornet to personally welcome the astronauts back to Earth. He told the astronauts, "Asaresult of what you've done, the world has never been closer together before." After Nixon departed, the Hornet was brought alongside the five-ton command module where it was placed aboard by the ship's crane, placed onadolly and moved next to the MQF. The Hornet sailed for Pearl Harbor where the command module and MQF were airlifted to the Johnson Space Center.